နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (Passport) ကို ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့် (အစ-အဆုံး) - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းလမ်းများ > နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (Passport) ကို ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့် (အစ-အဆုံး)
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 7:47 AM နည်းပညာဗဟုသုတ, နည်းလမ်းများ
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (Passport) ကို စနစ်တကျ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တစ်ခုတော့ လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ ကဲ . . . နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေလိုအပ်မလဲ။ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေက ဘာဖြစ်မလဲ။ ကြည့်ရအောင်။ တကယ်တော့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လုပ်တာက သိပ်မခက်ပါဘူး။ တန်းစီရတာဆိုတော့ နည်းနည်းပင်ပန်းပါတယ်။ ပွဲစားနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင် တစ်သိန်းရှစ်သောင်းလောက် ကုန်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကိုယ့်အနေနဲ့ အခုချက်ချင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပွဲစားနဲ့လုပ်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။ (ပုံမှန်ကတော့ ဆယ်ရက်စောင့်ရပါတယ်။) ကဲ . . . ဘာတွေလိုအပ်မလဲ။
မှတ်ပုံတင်မူရင်း – အိမ်ထောင်စုဇယားမူရင်း လိုပါတယ်။ (တစ်ခုသတိထားရမှာက မှတ်ပုံတင်ထဲက ကိုယ့်မွေးသက္ကရာဇ်နဲ့ အိမ်ထောင်စုဇယားထဲက ကိုယ့်မွေးသက္ကရာဇ်က တူညီနေဖို့ လိုပါတယ်။ မတူဘူးဆိုရင် အိမ်ထောင်စုဇယားထဲက မွေးသက္ကရာဇ်ကို ပြန်ပြင်ဖို့ ကိုယ့်မြို့ နယ် လဝကရုံးကို ပြန်ပြင်ပါ။) ပြီးတော့ မှတ်ပုံတင်နဲ့အိမ်ထောင်စုဇယား မိတ္တူနှစ်စောင်စီ လိုပါတယ်။ ဘောပင်တစ်ချောင်းရယ်။ ပိုက်ဆံသုံးသောင်းခွဲရယ် လိုပါတယ်။ (ဓာတ်ပုံရိုက်ရမှာဆိုတော့ လှလှပပလေးဖြစ်ချင်ရင် ဘီးလေးမှန်လေး ယူသွားပေါ့)။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (Passport) ကို ဘယ်ရက်မှာ သွားလုပ်မလဲလို့ ရွေးချယ်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ တနင်္လာနေ့နဲ့ သောကြာနေ့မျိုးတွေဟာ ရုံးစဖွင့်ရက်နဲ့ ရုံးပိတ်တော့မယ့်ရက်တွေဖြစ်တာကြောင့် လူစည်တတ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒီလိုရက်တွေ မသွားစေချင်ဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ပဲသွားတယ်။ မနက် (၈) နာရီမထိုးခင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရုံး (Passport Office) ကို ရောက်အောင် သွားပါ။ (နောက်ကျမှ သွားမယ်ဆိုရင် တစ်နေ့တည်း မပြီးမှာစိုးလို့ပါ။)
ရုံးအဝင်ဝမှာ တန်းစီနေတဲ့ လူအုပ်ကြီးကို တွေ့ ပါလိမ့်မယ်။ ယောက်ျား၊ မိန်းမ ခွဲပြီး တန်းစီရပါတယ်။ အဆင်သင့်သာ တန်းစီလိုက်ပါ။ (ဆယ်နှစ်အောက် ကလေးငယ်နဲ့ ခြောက်ဆယ်အထက် သက်ကြီးရွယ်အိုတွေအပြင် နာမကျန်းဖြစ်နေသူတွေအနေနဲ့ တန်းစီစရာ မလိုဘဲ တိုက်ရိုက်ဝင်သွားနိုင်ပါတယ်။)
ရုံးအဝင်ပေါက်မှာ မှတ်ပုံတင်မူရင်းနဲ့ အိမ်ထောင်စုဇယားမူရင်းကို ပြပြီး အထဲကို ဝင်လိုက်ပါ။ အထဲမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်မရှိပါဘူး။ လက်ကိုင်အိတ်ကို စစ်ဆေးရေးစက်ပေါ်မှာ တင်ပြီး နောက်ပေါက်က ပြန်ယူပါ။ Eye Scan လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ရဲအရှာရှိတွေက အများပြည်သူလုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်အရ စစ်ဆေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ အစစ်ဆေးခံလိုက်ပါ။ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းဖြည့်ဖို့ ရဲအရာရှိတွေဆီက စာရွက်ကို ယူလိုက်ပါ။ အခမဲ့ပါ။
‘အမည်’ နေရာကမှာ ကိုယ့်နာမည်ကို ‘ဦး ၊ ကို ၊ မောင် ၊ ဒေါ် ၊ မ’ မတပ်ဘဲ ဖြည့်ပေးပါ။ ‘မိဘအမည်၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ’ အချက်အလက်တွေကို သေချာဖြည့်ပါ။ စနစ်တကျမဖြည့်တတ်ရင် အနီးနားမှာရှိတဲ့ ရဲအရာရှိတွေကို မေးလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမျိုးအစားက အလည်အပတ် (Passport for Visit) ဖြစ်တဲ့အတွက် ‘ခရီးသွားမည့်ကိစ္စ’ နေရာမှာ ‘အလည်အပတ်’ လို့ပဲ ဖြည့်ရပါတယ်။ အလုပ်ကိစ္စသမား (Passport for Job) တွေကတော့ ‘အလုပ်’ လို့ ဖြည့်ရပါမယ်။ ‘လျှောက်ထားသည့်နိုင်ငံ’ နေရာမှာတော့ ‘စင်္ကာပူနိုင်ငံ’ လို့ပဲ ဖြည့်လိုက်ပါတယ်။ ‘လက်ရှိအလုပ်အကိုင်၊ မောင်နှမ၊ မိဘဆွေမျိုး’ နေရာမှာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ‘အမည်၊ ရက်စွဲ၊ ဖုန်းအမှတ်’ တွေကို ဖြည့်ပေးပြီး လက်မှတ်ထိုးလိုက်ရုံပါပဲ။ အချက်အလက်မမှားယွင်းရအောင် အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်လောက် စစ်ဆေးလိုက်ပါ။
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း၊ မှတ်ပုံတင်မူရင်းနဲ့ အိမ်ထောင်စုဇယားတွေကို ကိုင်ပြီး ရုံးအတွင်းပိုင်းထဲကို တန်းစီရပါမယ်။ အမှတ်စဉ် (၃) ကနေ (၁၁) အတွင်း လူနည်းတဲ့အတန်းမှာ တန်းစီလိုက်ပါ။ သက်ဆိုင်ရာအရာရှိက အချက်အလက်တွေကို သေသေချာချာစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီအဆင့်မှာ တစ်ခုခုမှားယွင်းနေရင်တော့ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (မှတ်ပုံတင်ထဲက ကိုယ့်မွေးသက္ကရာဇ်နဲ့ အိမ်ထောင်စုဇယားထဲမှာပါတဲ့ ကိုယ့်မွေးသက္ကရာဇ်က မတူဘူးဖြစ်နေလို့ အရာရှိက ပြန်လွှတ်ပါတယ်။ ခဲလေသမျှ သဲရေကျ ဖြစ်သွားပြီး လဝကရုံးကို ပြန်သွားပြင်ရပါတယ်။) အဲဒီနေရာမှာ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူနှစ်စောင်၊ အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူနှစ်စောင်နဲ့ ငွေငါးထောင် ပေးခဲ့ရပါတယ်။ (သူများတွေတော့ နှစ်ထောင်ပဲ ပေးခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော့်အိမ်ထောင်စုဇယားမှာက မွေးသက္ကရာဇ်ပြင်ရာ ပါနေလို့ ပိုတောင်းတဲ့သဘောပါ။) လက်ဗွေနှိပ်ရပါတယ်။ အရာရှိက စစ်ဆေးပြီးကြောင်း လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ပါတယ်။
စစ်ဆေးပြီးကြောင်း လက်မှတ်ကို ကိုင်ပြီး ငွေစာရင်းဌာနမှာ နှစ်သောင်းခွဲသွားသွင်းရပါတယ်။ စစ်ဆေးရေးအရာရှိရဲ့ လက်မှတ်ကို ငွေစာရင်းဌာနကို ပြန်ပြရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ လုပ်ဆောင်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို နားမလည်ရင် အနီးနားမှာရှိတဲ့ ရဲအရာရှိတွေကို မေးမြန်းလို့ရပါတယ်။ သူတို့ကလည်း စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြကြပါတယ်။ ငွေစာရင်းမှာ ပိုက်ဆံသွင်းပြီးရင်တော့ ဓာတ်ပုံရုိက်ဖို့ တန်းစီရုံပါပဲ။ နောက်ဆုံးအဆင့် ရောက်ပါပြီ။ ကိုယ့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မှာ ပုံလှလှလေးထွက်ချင်ရင်တော့ အသင့်ယူလာတဲ့ မှန်လေးကို ထုတ်ရင်း အလှပြင်လို့ ရပါသေးတယ်။ စိတ်တိုင်းကျသာ အလှပြင်ပေတော့ဗျာ။ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခန်းထဲမှာ ရဲအရာရှိနှစ်ဦးက အဆင်သင့်စောင့်နေပါတယ်။ ပထမရဲအရာရှိကို စစ်ဆေးပြီးတဲ့ စာရွက်နဲ့ ငွေသွင်းပြီးကြောင်း စာရွက်တွေကို ပြလိုက်ပါ။ နောက်ရဲအရာရှိက ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ လက်ဗွေရာ ထပ်နှိပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လက်နှစ်ဖက်လုံးနဲ့ လက်တစ်ချောင်းချင်းစီ နှိပ်ပေးရပြီး Eye Scan ကို နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ဖတ်ပေးရပါတယ်။ ဒါတွေ ပြီးရင်တော့ ပိုက်ဆံငါးထောင် သွင်းခဲ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လာထုတ်ဖို့ စလစ်တစ်စောင်ပေးရပြီး နောက်ဆယ်ရက်ကြာရင် လာထုတ်ဖို့ မှာလိုက်ပါတယ်။ ဥပမာ – ကိုယ့်စလစ်မှာ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ရမယ့် ရက်စွဲက ရုံးပိတ်ရက်ဆိုရင် (ဥပမာ – စနေနေ့) တနင်္လာနေ့မှ သွားထုတ်လိုက်ပါ။ (ဆယ်ရက်ဆိုပေမယ့် ရက်အတိအကျ မသွားလည်း ရပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရက်စွဲကနေ ရက်ကိုးဆယ်အတွင်း ထုတ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကဲ . . ဒီအချက်တွေပြီးရင်တော့ လုပ်ငန်းစဉ်က ပြီးဆုံးပါပြီ။ Exit လို့ ပြထားတဲ့ အပေါက်က ထွက်ခဲ့ရုံပါပဲ။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ မှတ်ပုံတင်နဲ့ စလစ်ကို ယူပြီး ရုံးရဲ့ ဒုတိယအထပ်မှာ သွားထုတ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ဒီအဆင့်မှာ သုံးထောင်တော့ ကုန်ပါတယ်။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လုပ်တဲ့အဆင့်မှာတော့ သုံးသောင်းခွဲကုန်သလို ထုတ်တဲ့အဆင့်မှာတော့ သုံးထောင်ကုန်ပါတယ်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရုံးဟာ အမြဲတမ်းလူပြည့်နေတတ်ပြီး ဝန်ထမ်းအင်အားနဲ့ ပြည်သူလူထု မမျှတတာကြောင့် ရဲအရာရှိတွေအနေနဲ့ ပင်ပန်းတတ်ပါတယ်။ အမှားအယွင်းပါရင် စိတ်မရှည်ဖြစ်တတ်ပြီး စကားပြောမာကျောတတ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကိုယ့်အနေနဲ့ သူ့ဘက်က အခြေအနေကို နားလည်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရုံးကို တစ်နေရာတည်းမှာ မထားဘဲ ရုံးခွဲထားရင် အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
နိုငျငံကူးလကျမှတျ (Passport) ကို ပွုလုပျပုံအဆငျ့ဆငျ့ (အစ-အဆုံး)
[Unicode] ဖွငျ့ဖတျရနျ နိုငျငံကူးလကျမှတျ (Passport) ကို စနဈတကြ ဘယျလိုလုပျမလဲ
ဒီနခေ့တျေမှာ လူငယျတဈယောကျအနနေဲ့ နိုငျငံကူးလကျမှတျတဈခုတော့ လုပျထားသငျ့ပါတယျ။ ကဲ . . . နိုငျငံကူးလကျမှတျလုပျမယျဆိုရငျ ဘာတှလေိုအပျမလဲ။ ဆောငျရနျရှောငျရနျတှကေ ဘာဖွဈမလဲ။ ကွညျ့ရအောငျ။ တကယျတော့ နိုငျငံကူးလကျမှတျလုပျတာက သိပျမခကျပါဘူး။ တနျးစီရတာဆိုတော့ နညျးနညျးပငျပနျးပါတယျ။ ပှဲစားနဲ့လုပျမယျဆိုရငျ တဈသိနျးရှဈသောငျးလောကျ ကုနျတယျလို့ သိရပါတယျ။ ကိုယျ့အနနေဲ့ အခုခကျြခငျြးလိုခငျြတယျဆိုရငျတော့ ပှဲစားနဲ့လုပျတာက ပိုကောငျးပါတယျ။ (ပုံမှနျကတော့ ဆယျရကျစောငျ့ရပါတယျ။) ကဲ . . . ဘာတှလေိုအပျမလဲ။
မှတျပုံတငျမူရငျး – အိမျထောငျစုဇယားမူရငျး လိုပါတယျ။ (တဈခုသတိထားရမှာက မှတျပုံတငျထဲက ကိုယျ့မှေးသက်ကရာဇျနဲ့ အိမျထောငျစုဇယားထဲက ကိုယျ့မှေးသက်ကရာဇျက တူညီနဖေို့ လိုပါတယျ။ မတူဘူးဆိုရငျ အိမျထောငျစုဇယားထဲက မှေးသက်ကရာဇျကို ပွနျပွငျဖို့ ကိုယျ့မွို့ နယျ လဝကရုံးကို ပွနျပွငျပါ။) ပွီးတော့ မှတျပုံတငျနဲ့အိမျထောငျစုဇယား မိတ်တူနှဈစောငျစီ လိုပါတယျ။ ဘောပငျတဈခြောငျးရယျ။ ပိုကျဆံသုံးသောငျးခှဲရယျ လိုပါတယျ။ (ဓာတျပုံရိုကျရမှာဆိုတော့ လှလှပပလေးဖွဈခငျြရငျ ဘီးလေးမှနျလေး ယူသှားပေါ့)။
နိုငျငံကူးလကျမှတျ (Passport) ကို ဘယျရကျမှာ သှားလုပျမလဲလို့ ရှေးခယျြတတျဖို့ လိုပါတယျ။ တနင်ျလာနနေဲ့ သောကွာနမြေို့းတှဟော ရုံးစဖှငျ့ရကျနဲ့ ရုံးပိတျတော့မယျ့ရကျတှဖွေဈတာကွောငျ့ လူစညျတတျပါတယျ။ ဖွဈနိုငျရငျ အဲဒီလိုရကျတှေ မသှားစခေငျြဘူး။ ကြှနျတျောကတော့ ဗုဒ်ဓဟူးနပေဲ့သှားတယျ။ မနကျ (၈) နာရီမထိုးခငျ နိုငျငံကူးလကျမှတျရုံး (Passport Office) ကို ရောကျအောငျ သှားပါ။ (နောကျကမြှ သှားမယျဆိုရငျ တဈနတေ့ညျး မပွီးမှာစိုးလို့ပါ။)
ရုံးအဝငျဝမှာ တနျးစီနတေဲ့ လူအုပျကွီးကို တှေ့ ပါလိမျ့မယျ။ ယောကျြား၊ မိနျးမ ခှဲပွီး တနျးစီရပါတယျ။ အဆငျသငျ့သာ တနျးစီလိုကျပါ။ (ဆယျနှဈအောကျ ကလေးငယျနဲ့ ခွောကျဆယျအထကျ သကျကွီးရှယျအိုတှအေပွငျ နာမကနျြးဖွဈနသေူတှအေနနေဲ့ တနျးစီစရာ မလိုဘဲ တိုကျရိုကျဝငျသှားနိုငျပါတယျ။)
ရုံးအဝငျပေါကျမှာ မှတျပုံတငျမူရငျးနဲ့ အိမျထောငျစုဇယားမူရငျးကို ပွပွီး အထဲကို ဝငျလိုကျပါ။ အထဲမှာ ဓာတျပုံရိုကျခှငျ့မရှိပါဘူး။ လကျကိုငျအိတျကို စဈဆေးရေးစကျပျေါမှာ တငျပွီး နောကျပေါကျက ပွနျယူပါ။ Eye Scan လုပျပါလိမျ့မယျ။ ရဲအရှာရှိတှကေ အမြားပွညျသူလုံခွုံရေးအတှကျ တာဝနျအရ စဈဆေးနတောဖွဈတဲ့အတှကျ ကွညျကွညျဖွူဖွူ အစဈဆေးခံလိုကျပါ။ ကိုယျရေးမှတျတမျးဖွညျ့ဖို့ ရဲအရာရှိတှဆေီက စာရှကျကို ယူလိုကျပါ။ အခမဲ့ပါ။
‘အမညျ’ နရောကမှာ ကိုယျ့နာမညျကို ‘ဦး ၊ ကို ၊ မောငျ ၊ ဒျေါ ၊ မ’ မတပျဘဲ ဖွညျ့ပေးပါ။ ‘မိဘအမညျ၊ မှေးသက်ကရာဇျ၊ နရေပျလိပျစာ၊ လူမြိုး၊ ဘာသာ’ အခကျြအလကျတှကေို သခြောဖွညျ့ပါ။ စနဈတကမြဖွညျ့တတျရငျ အနီးနားမှာရှိတဲ့ ရဲအရာရှိတှကေို မေးလို့ရပါတယျ။ ကြှနျတျောလုပျတဲ့ နိုငျငံကူးလကျမှတျအမြိုးအစားက အလညျအပတျ (Passport for Visit) ဖွဈတဲ့အတှကျ ‘ခရီးသှားမညျ့ကိစ်စ’ နရောမှာ ‘အလညျအပတျ’ လို့ပဲ ဖွညျ့ရပါတယျ။ အလုပျကိစ်စသမား (Passport for Job) တှကေတော့ ‘အလုပျ’ လို့ ဖွညျ့ရပါမယျ။ ‘လြှောကျထားသညျ့နိုငျငံ’ နရောမှာတော့ ‘စင်ျကာပူနိုငျငံ’ လို့ပဲ ဖွညျ့လိုကျပါတယျ။ ‘လကျရှိအလုပျအကိုငျ၊ မောငျနှမ၊ မိဘဆှမြေိုး’ နရောမှာ ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံ ဖွညျ့ပေးလိုကျပါ။ နောကျဆုံးမှာတော့ ‘အမညျ၊ ရကျစှဲ၊ ဖုနျးအမှတျ’ တှကေို ဖွညျ့ပေးပွီး လကျမှတျထိုးလိုကျရုံပါပဲ။ အခကျြအလကျမမှားယှငျးရအောငျ အနညျးဆုံးနှဈကွိမျလောကျ စဈဆေးလိုကျပါ။
ကိုယျရေးမှတျတမျး၊ မှတျပုံတငျမူရငျးနဲ့ အိမျထောငျစုဇယားတှကေို ကိုငျပွီး ရုံးအတှငျးပိုငျးထဲကို တနျးစီရပါမယျ။ အမှတျစဉျ (၃) ကနေ (၁၁) အတှငျး လူနညျးတဲ့အတနျးမှာ တနျးစီလိုကျပါ။ သကျဆိုငျရာအရာရှိက အခကျြအလကျတှကေို သသေခြောခြာစဈဆေးပါလိမျ့မယျ။ ဒီအဆငျ့မှာ တဈခုခုမှားယှငျးနရေငျတော့ နောကျကွောငျးပွနျလှညျ့ရမှာဖွဈပါတယျ။ (မှတျပုံတငျထဲက ကိုယျ့မှေးသက်ကရာဇျနဲ့ အိမျထောငျစုဇယားထဲမှာပါတဲ့ ကိုယျ့မှေးသက်ကရာဇျက မတူဘူးဖွဈနလေို့ အရာရှိက ပွနျလှတျပါတယျ။ ခဲလသေမြှ သဲရကြေ ဖွဈသှားပွီး လဝကရုံးကို ပွနျသှားပွငျရပါတယျ။) အဲဒီနရောမှာ မှတျပုံတငျမိတ်တူနှဈစောငျ၊ အိမျထောငျစုဇယားမိတ်တူနှဈစောငျနဲ့ ငှငေါးထောငျ ပေးခဲ့ရပါတယျ။ (သူမြားတှတေော့ နှဈထောငျပဲ ပေးခဲ့ရပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့အိမျထောငျစုဇယားမှာက မှေးသက်ကရာဇျပွငျရာ ပါနလေို့ ပိုတောငျးတဲ့သဘောပါ။) လကျဗှနှေိပျရပါတယျ။ အရာရှိက စဈဆေးပွီးကွောငျး လကျမှတျထိုးပေးလိုကျပါတယျ။
စဈဆေးပွီးကွောငျး လကျမှတျကို ကိုငျပွီး ငှစောရငျးဌာနမှာ နှဈသောငျးခှဲသှားသှငျးရပါတယျ။ စဈဆေးရေးအရာရှိရဲ့ လကျမှတျကို ငှစောရငျးဌာနကို ပွနျပွရပါတယျ။ ဒီနရောမှာ လုပျဆောငျပုံအဆငျ့ဆငျ့ကို နားမလညျရငျ အနီးနားမှာရှိတဲ့ ရဲအရာရှိတှကေို မေးမွနျးလို့ရပါတယျ။ သူတို့ကလညျး စိတျရှညျလကျရှညျ ရှငျးပွကွပါတယျ။ ငှစောရငျးမှာ ပိုကျဆံသှငျးပွီးရငျတော့ ဓာတျပုံရိုကျဖို့ တနျးစီရုံပါပဲ။ နောကျဆုံးအဆငျ့ ရောကျပါပွီ။ ကိုယျ့နိုငျငံကူးလကျမှတျမှာ ပုံလှလှလေးထှကျခငျြရငျတော့ အသငျ့ယူလာတဲ့ မှနျလေးကို ထုတျရငျး အလှပွငျလို့ ရပါသေးတယျ။ စိတျတိုငျးကသြာ အလှပွငျပတေော့ဗြာ။ ဓာတျပုံရိုကျတဲ့အခနျးထဲမှာ ရဲအရာရှိနှဈဦးက အဆငျသငျ့စောငျ့နပေါတယျ။ ပထမရဲအရာရှိကို စဈဆေးပွီးတဲ့ စာရှကျနဲ့ ငှသှေငျးပွီးကွောငျး စာရှကျတှကေို ပွလိုကျပါ။ နောကျရဲအရာရှိက ဓာတျပုံရိုကျပေးပါလိမျ့မယျ။ နောကျဆုံးအဆငျ့မှာ လကျဗှရော ထပျနှိပျပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ လကျနှဈဖကျလုံးနဲ့ လကျတဈခြောငျးခငျြးစီ နှိပျပေးရပွီး Eye Scan ကို နောကျတဈကွိမျ ပွနျဖတျပေးရပါတယျ။ ဒါတှေ ပွီးရငျတော့ ပိုကျဆံငါးထောငျ သှငျးခဲ့ရပါတယျ။ နိုငျငံကူးလကျမှတျလာထုတျဖို့ စလဈတဈစောငျပေးရပွီး နောကျဆယျရကျကွာရငျ လာထုတျဖို့ မှာလိုကျပါတယျ။ ဥပမာ – ကိုယျ့စလဈမှာ နိုငျငံကူးလကျမှတျထုတျရမယျ့ ရကျစှဲက ရုံးပိတျရကျဆိုရငျ (ဥပမာ – စနနေေ့) တနင်ျလာနမှေ့ သှားထုတျလိုကျပါ။ (ဆယျရကျဆိုပမေယျ့ ရကျအတိအကြ မသှားလညျး ရပါတယျ။ သတျမှတျထားတဲ့ ရကျစှဲကနေ ရကျကိုးဆယျအတှငျး ထုတျပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ကဲ . . ဒီအခကျြတှပွေီးရငျတော့ လုပျငနျးစဉျက ပွီးဆုံးပါပွီ။ Exit လို့ ပွထားတဲ့ အပေါကျက ထှကျခဲ့ရုံပါပဲ။ နိုငျငံကူးလကျမှတျထုတျမယျဆိုရငျတော့ မှတျပုံတငျနဲ့ စလဈကို ယူပွီး ရုံးရဲ့ ဒုတိယအထပျမှာ သှားထုတျလိုကျရုံပါပဲ။ ဒီအဆငျ့မှာ သုံးထောငျတော့ ကုနျပါတယျ။
နိုငျငံကူးလကျမှတျလုပျတဲ့အဆငျ့မှာတော့ သုံးသောငျးခှဲကုနျသလို ထုတျတဲ့အဆငျ့မှာတော့ သုံးထောငျကုနျပါတယျ။ နိုငျငံကူးလကျမှတျရုံးဟာ အမွဲတမျးလူပွညျ့နတေတျပွီး ဝနျထမျးအငျအားနဲ့ ပွညျသူလူထု မမြှတတာကွောငျ့ ရဲအရာရှိတှအေနနေဲ့ ပငျပနျးတတျပါတယျ။ အမှားအယှငျးပါရငျ စိတျမရှညျဖွဈတတျပွီး စကားပွောမာကြောတတျပါတယျ။ ဒီနရောမှာ ကိုယျ့အနနေဲ့ သူ့ဘကျက အခွအေနကေို နားလညျပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ နိုငျငံကူးလကျမှတျရုံးကို တဈနရောတညျးမှာ မထားဘဲ ရုံးခှဲထားရငျ အဆငျပွသှေားမယျလို့ထငျပါတယျ။ အားလုံး အဆငျပွကွေပါစလေို့ ဆုတောငျးလိုကျပါတယျ။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (Passport) ကို ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့် (အစ-အဆုံး) Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 7:47 AM Rating:5[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (Passport) ကို စနစ်တကျ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တစ်ခုတော့...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 7:47 AM